चीफ सा’ब हाम्रा गुनासाहरूको सुनवाई होस्
साँघु साप्ताहिक र साँघुन्यूज डटकममा नेपाली सेना भित्रका अनियमितता, खराब आचरण, शोषण, दमनका समाचार, सैनिकहरूका पीरमर्का प्रकाशित भएपछि विभिन्न किसिमका सयौं प्रतिक्रियाहरू आउने गरेका छन् । जस्तो आर्मी हस्पिटलमा नेपाली सेनाका अन्य दर्जा र तिनका परिवारलाई खासै राम्रो उपचार हुन्न, टाढादेखि आयो बल्लतल्ल डाक्टरले चेक अप गर्ने ठाउँमा पुगिन्छ ।
त्यहाँका चिकित्सकलाई आफ्नो रोग र शारीरिक समस्याहरू भनी नसक्दै डेटएक्स्पाएर हुन लागेको, सस्तो खालको १५÷२० रुपैयाँ पर्ने ग्यास्टिकको ट्याब्लेट लेखेर डाक्टर भन्ने ठालूहरूले ‘‘बढी नबोल्ने’’ भन्दै झपार्दै, त्यहाँबाट जानको लागि आदेश दिइसकेको हुन्छ । सैनिक अस्पताल जाँदा खर्च रु. २०००÷२५०० हुन्छ । त्यही पैसा बाहिर राम्रो हस्पिटल खर्च गर्ने हो भने उचित उपचार र रोगको पहिचान हुन्छ ।
हाम्रै रगत पसिनाले चलेको सैनिक अस्पतालमा सैनिक अधिकृत र अन्य दर्जालाई गर्ने ब्यवहारमा आकास जमिनको फरक छ । रोगी र रोग पनि सानो÷ठूलो दर्जा हुन्छ र चीफ सा’ब ? वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालका चिकित्सकको बानीब्यहोरा र शैलीमा भइरहेको भेदभावलाई अन्त्य गर्न नसकेपनि यसमा न्यूनीकरण गर्ने अभियान पूर्णचन्द्र थापा चीफ सा’बको कार्यकालमा सुरु होस् भन्ने अनुरोध गर्दछौं ।
– अस्पताल पीडित अन्य दर्जाहरू, नेपाली सेना
नेपाली सेनाको यूएन मिशनमा पनि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको विशेष ध्यान जावोस् भन्ने अनुरोध गर्दछौं । यूएन मिशनमा प्रयोग हुने र गरेका सबै खाले हतियारहरूको छुट्टाछुट्टै, गाडीहरूको पनि छुट्टाछुट्टै बजेट डलरमा आउँछ भने यता सरकारले पनि नेपाली सेनाको शान्ति मिशनका लागि भनेर छुट्टै बजेट दिएको हामी सुन्छौं । हामीले सुने अनुसार, हरेक मिशनको बन्दोबस्ती सामानलाई पुग्ने गरी बजेट दिएको हुन्छ ।
यो बजेटमा ब्यापक हिनामिना हुने, गणपतिहरू र सबै अधिकृत मिलेर भागबन्ड गरेर खाएका हुन्छन् । अर्को नेपालबाट मिशन जानु अगाडि १ महिनासम्मको राशन स्केल एउटा युनिटलाई दिएको हुन्छ । जवानहरूलाई चाहिं छुट्टीमा घर÷घरमा पठाइएको हुन्छ । फेरि मिशनबाट फर्किदा पनि राशन स्केल त्यसैगरी एउटा युनिटमा राखेर घर विदा छोडिन्छ भने त्यो राशनको पैसा ती सोझो जवानहरूले पाउँदैनन् । सम्बन्धित युनिटका हाकिमहरूले मिलेर भातभान्सा रमाइलो गर्ने गर्छन् । सिपाही वा अन्य दर्जाको राशनबाट खल्ती भर्ने काम हुन्छ । चीफ सा’ब यसतर्फ पनि ध्यादृष्टि जावोस्, पीडितले न्याय पाउन् र अनियमित काम गर्नेहरूप्रति छानबिन गर्न जरुरी छ ।
नेपाली सेनाबाट शान्ति मिशनमा जानेहरूका लागि एकदिनको पनि तलब, भत्ता दिन्छ । तर, यो रकम तेलामेला गरेर हाम्रा अधिकृतहरूले आफ्नो गोजीमा हाल्छन् । उदाहरणका लागि जस्तै नेपाली सेनाले अहिले एक वर्षको रु. १२÷१३ लाख हात पार्छन् भने नेपालकै अर्को फोर्स सशस्त्र प्रहरी बलबाट यूएन मिशनमा जानेहरूले एक वर्षको रु. १९ लाख देखि २१ लाखसम्म हात पार्छन् ।
एकै देशको फोर्समा काम गर्नेहरूमा यत्रो रकम कसरी फरक भयो । हाम्रो नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषमा पचासौं अर्ब रकम हाम्रै रगत पसिनाको जम्मा भएर बसेको छ । सो रकमको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । हामी नेपाली सेनाका अन्य दर्जालगायतको मिशनमा हुने शोषणका बारेमा प्रधानसेनापतिज्यूबाट विशेष कदम चालेर नयाँ नियम बसालियोस् भन्ने अनुरोध गर्दछौं ।
सेनाको अन्य क्षेत्रमा देखिन थालेको सुधार यूएन मिशनको पुरानो नियममा संशोधन होस् र पीडितहरूप्रति न्याय होस् भन्ने आग्रह गर्दछौं ।
–मिशन पीडितहरू, नेपाली सेना